MySNS Carteira 3.4.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.4.5 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး MySNS Carteira
MySNS Carteira ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Você escolheainformação pretende guardar! Todaainformação é guardada de forma segura.
Contamos com as suas sugestões para atendimento@sns24.gov.pt
အဆိုပါနိုင်ငံသားများ၏စိတ်ဝင်စားမှုသည်နှင့်အညီတညျဆောကျ, အ MySNS Portfolio သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာနေထိုင်သူလျှောက်လွှာအတွက်နိုင်ငံသား၏ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်အတူတကွတတ်၏။ အကျိုးစီးပွားတိကျတဲ့အချက်အလက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုများအတွက်ကာကွယ်ဆေးeCartão, Utente NHS ၏၎င်း၏အရေအတွက်ကနေတဆင့်နိုင်ငံသားနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှတ်ပုံတင်မည် Utente (RNU) တွင်ဤသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအတည်ပြု, eTestamento အရေးပါသည်နိုင်ငံသားအသင်းအဖွဲ့ "ကတ်များ" ။ တစ်ခုချင်းစီကိုကဒ်ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားနဲ့ကိုက်ညီ။
ကျနော်တို့ atendimento@sns24.gov.pt ရန်သင့်အကြံပြုချက်များအပေါ်ရေတွက်
MySNS Carteira အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
MySNS Carteira အား အခ်က္ျပပါ
cunhavaz စတိုး 96 23.08k
MySNS Carteira ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း MySNS Carteira အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.4.5
ထုတ်လုပ်သူ SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://spms.min-saude.pt/ces-carteira-eletronica-da-saude-termos-condicoes/
App Name: MySNS Carteira
Release date: 2019-07-02 09:34:18
လက်မှတ် SHA1: C7:FB:30:B4:CA:C3:A1:57:13:85:0B:BE:F3:BF:69:11:C5:6E:F5:4A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Tom? Vardasca
အဖွဲ့အစည်း (O): "SPMS
MySNS Carteira APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ